Wenger oo shaaca ka qaaday go’aankiisa ku aadan suurtogalnimada uu dib ugu soo laaban karo kooxda Arsenal – Gool FM
Wenger oo shaaca ka qaaday go’aankiisa ku aadan suurtogalnimada uu dib ugu soo laaban karo kooxda Arsenal
Dajiye September 3, 2021
(London) 03 Sept 2021. Tababaraha rugcadaaga ah ee reer France ee Arsène Wenger ayaa shaaca ka qaaday go’aankiisa ku aadan suurtogalnimada uu dib ugu soo laaban karo kooxda Arsenal, si uu noqdo badelka Mikel Arteta.
Arsène Wenger ayaa u sheegay shabakada “Bild” ee dalka Jarmalka:
“Waxaan ahay 71 jir, waxaan siiyay kooxdan sanadihii noloshayda ugu fiicnaa, waqtigan waxaan ahay kaliya taageere kooxda ah.”
Wenger ayaa sidoo kale muujiyay inuusan wax walwal ah ka qabin naadiga Gunners, inkasta oo ay kooxda si niyadjab leh ku bilaabatay saddexdii kulan ugu horreysay horyaalka, iyada oo sidoo kale ku guuldarreysatay in xitaa ay hal gool dhaliso, waxaa laga dhaliyay 9 gool, waxayna qeybta hoose ka hoggaamineysaa miisk kala sarreynta horyaalka.
Tababaraha rugcadaaga ah ee reer France ayaa intaa ku daray:
“Kooxda waxay ku jirtaa xaallad wanaagsan xilligan, kooxda waxay la ciyaartay Chelsea iyo Manchester City waana laba kulan oo aad u adag.”
Arsene Wenger ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay:
“Arsenal waxay leedahay awood iyo karti wanaagsan, waxaana rajaynayaa inay soo laaban doonto.”
Riquelme oo shaaca ka qaaday kooxda uu Messi ku soo gabagabeyn doono xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta
“Waxaan rabaa inaan dhaliyo 30 gool xilli ciyaareedkan” – Sadio Mane